Dhaqdhaqaaq / VR
Our koox ayaa faylalka ballaaran ka kun ee mashaariicda maxalliga ah Chinese sida Beijing Jianwai SOHO, Zhujiang Newtown, ee Memorial ee Xasuuqa Nanjing si kuwa caalamka ballaariyo guud ahaan Asia & Pacific, Bariga Dhexe iyo Yurub kala duwan.
Aasaasay sannadkii 2002, Frontop ayaa aasaasay ay waaxda dibada si loo ballaariyo suuqa caalamka ee 2010. Hadda Frontop waxa uu noqday mid ka mid ah shirkadaha keentay muuqaalaynta naqshadda ee Shiinaha. Waxaan leenahay xafiisyada u furan in Beijing, Shanghai, Guangzhou iyo Shenzhen. Qalabaysan koox tayo iyo khibrad leh ee visualizers 3D, fanaaniinta iyo samaynta graphic, waxaan ku dadaalaan si ay u siiyaan macaamiisha our adeeg tayo sare leh. By horumarinta aalada wax ku ool ah, aan ka helnay qanacsanaanta iyo sumcad ka macaamiisheena sii kordhaya.
Takhasusay adeega muuqaalaynta naqshadda oo ay ku jiraan haya'ad 3D naqshadda, animation 3D, multi-warbaahinta hay'adaha design, shirkadaha hantida maguurtada ah iyo la taliyayaal naqshadda, Frontop had iyo jeer wuu dhawri doonaa inaan horumarin tayada iyo adeegga si ay u daboolaan baahiyaha iyo shuruudaha ka macaamiisheena.
Maanta waxaan ka faa'iiday ka mid ah qaar ka mid ah injineero top iyo samaynta ay ka mid yihiin 10 Design, Gensler, Aedas, Benoy, DP Horseedayaashii, BDP, South China University of Technology, University Tongji iwm kalsoonida qoto dheer iyo iskaashi muddo dheer ah
Shiinaha Gudaha haya'ad , muuqaalaynta haya'ad 3D , 3D Gudaha haya'ad , haya'ad 3D , Arrimaha Gudaha haya'ad , haya'ad Architectural,
No. 18. Beeraha Makiinado Institute, No. 261 Wushan Street, Degmada Tianhe, Guangzhou, Shiinaha.
3D Software si Creat Renderings ah